Waxaa odayaasha magaalada Ceel Cirfiid, degmada Balcad, ee gobolka shabeelaha dhexe u soo gudbiyey danjire Maxamed Cali Nuur (Ameeriko) dhibaatada ka haysata helitaanka biyo nadiif ah gobolka maadaama xubnaha magaalada ay ku qasbanaadeen inay u safraan masaafo dheer si ay u gaaraan baraha biyaha taasoo ay wehliso la'aanta goobo waxbarasho oo isla gobolka ah.
Safiirka kadib markii uu kooxdiisa la qiimeeyay xaalada,sanadkii 2010 wuxuu bilaabay aasaasida hay’ada Yasmiin Foundation taas oo ay u suura gashay inay ku dhameystirto mashruucoodii ugu horeeyay ee gobolka. Mu'asasada ayaa ku guuleysatay inay ka qodaan ceel biyood shaqeynaya gobolka kaasoo wax weyn u taray dadka reer Ceel Cirfiid maadaama ay qoysaskaasi sii isticmaalaan ilaa maanta.
Bishii Ogosto 2014 Yasmin foundation waxay mashruuc labaad ka fulisay isla gobolkaas halkaas oo ay ka dhistay iskuul loogu magac daray Yasmiin School oo u suura galiyay in ka badan 200 arday ay helaan waxbarasho bilaash ah oo tayo leh maadaama ay hubisay inay siiso iskuulka dhamaan agabyada loo baahan yahay. iyo shaqaalaha. mu’asasada waxay ku guuleysatay maaraynta dugsiga iyada oo shaqaaleysiisay shaqaale aqoon leh.
Mu’asasada Yasmin Foundation waxay markii dambe ka dhistay xarumo dheeri ah iskuulka dhexdiisa kuwaasoo ahaa rugo caafimaad oo inta badan wax u qabta caruurta nugul iyo hooyooyinka uurka leh si loo abuuro bulsho caafimaad qabta ayna yareeyaan halista ah inay lumiyaan hooyooyin badankood ku dhala xaalado qatar ah oo naftooda halis gelinaya.
Guusha dhameystirka mashaariicdan kaliya ma kordhin tayada nolosha dadka reer Ceel Cirfiid laakiin waxay siisay rajo maadaama carruurtooda ay ku jiraan gacmo ammaan ah oo ay ku mashquulsan yihiin barashada horumarka mustaqbalkooda iyo mustaqbalka Soomaaliya.